musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resorts » Sandals Foundation Inofuridzira Tariro Itsva muJamaica
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Sandals Foundation Inokurudzira Tariro
The Sandals Foundation inotenda kuti chiito chetariro inokurudzira isimba rinogona kufambisa makomo. Tariro, muchimiro chayo chakareruka, inogona kukurudzira chiito nesimba uye nekuchinja zvakanaka njere uye manzwiro.
Nheyo isangano risingabatsiri rakavambwa muna Kurume 2009 kubatsira Sandals Resorts International kuramba ichiita mutsauko muCaribbean.
Zvese zvinodhura zvine chekuita nekutonga uye manejimendi zvinotsigirwa neSandals International.
100% yedhora rega rega rinopihwa rinoenda zvakananga kumari inobatsira uye ine chinangwa mukati menzvimbo dzakakosha dzedzidzo, nharaunda uye nharaunda.
Kune maSandals Foundation mapurojekiti muzvitsuwa zvese uko Sandals iripo. Nhasi, isu tinotarisa pane izvo tariro yakakurudzira muJamaica.
Sandals Foundation yaita uye yakatsigira mapurojekiti nematanho anotsigira kusimudzira nharaunda dzenzvimbo, kukwidziridzwa kwezvirongwa zvedzidzo nekuchengetedza nharaunda mukati meJamaica.
Flanker Runyararo & Justice Center
Iyo Sandals Foundation inoshanda munharaunda yemukati meguta reFlanker nevadzidzi vangangosvika mazana matatu vanoshandisa Justice Center mwedzi wega wega. Iyo Afterschool Care uye Yakawedzerwa Rutsigiro (ACES) Chirongwa chakaunzwa neSandals Foundation kuti ive yakachengeteka, yakarongeka nharaunda umo vechidiki vari panjodzi kubva munharaunda vanogona kubatsirwa nekuzvitsaurira kuraira uye kudzidziswa, rutsigiro rwakatungamirwa nebasa ravo rechikoro uye mabasa, uye kutora chikamu inotariswa zviitiko zvemasikati zvinokurudzira maitiro akanaka emagariro.
Iyo Sandals / Flanker Kudzidziswa uye Recruitment Tier chirongwa chakapa mabasa uye kudzidza, inoitirwa hutano fairs, uye kukurudzira kuverenga nekunyora.
Yakakura Shape Dental & Eye Care Program
Gore rega rega runyorwa rwevazvipiri runosanganisira ophthalmologists, optometrists, opticians, optical technicians, vanamukoti, uye vasingatarise maziso vanozvipira vanobva kuUnited States neCanada kutora chikamu mukiriniki yevhiki rese yakaitwa kuburikidza nekudyidzana neSandals Foundation nedzimwe nharaunda. shamwari.
iCARE yakabatana zvakare neCornwall Regional Hospital kuita maoparesheni anosvika makumi mashanu emahara emahara kune avo vanonyanya kuda.
Pamwe chete, Great Shape Dental uye Eye Care zvirongwa zvakanganisa vanhu vanopfuura zana nemakumi mashanu,150,000 muJamaica.
Iyo Sandals Foundation yakabatana neBazi rezvekurima neFisheries, inoshanda zvizere uye inotarisira nzvimbo mbiri dzemugungwa muJamaica - iyo Boscobel neWhitehouse Marine Sanctuary.
Nzvimbo dzemugungwa dzinobatsira kuvandudza hove munzvimbo dziri kudzikira dzekubata hove dzeJamaica, pamwe nekudzidzisa nezve kukosha kwekuchengetedza hupenyu hwemugungwa uye mararamiro evaredzi veko.
Boscobel Sanctuary yanga ichishanda zvizere kubva muna Chivabvu 2013 paine kuwedzera kwe333% kwehove hove muna 2015. Whitehouse Marine Sanctuary yanga ichishanda zvizere kubva muna Chivabvu 2015.
Kuti chirongwa ichi chienderere mberi, Sandals Foundation yakatanga mishandirapamwe yakawanda yekudzidzisa vashanyi, nhengo dzechikwata, uye vana vechikoro kuti vanzwisise kukosha kwekuchengetedza kamba uye basa rinoitwa nemunhu wega wega. Pamusoro pezvo, nhengo dzechikwata dzakadzidziswawo pane zvavanofanira kuita kana turtle ikakandira mazai pane chero zvivakwa zveSandles kana Beaches Resorts.
Vashanyi munharaunda yeOcho Rios vanogona kutora chikamu murwendo rweturtle kwavanokwanisa kushanyira Gibraltar beach uye kudzidza nezve turtles dzegungwa uye vana vegungwa turtles pamwe nekuvaona vachidzokera kugungwa.
Sandals Foundations vanodyidzana neCARIBSAVE, Coral Restoration Foundation, uye Bluefield's Fisherman's hushamwari nzanga kuti vavake makorori maviri emuJamaica mukati meBluefield's bay marine sanctuary uye Boscobel marine sanctuary. Pamwe chete aya makorori anokura anodarika 3,000 zvidimbu zvekorari pagore. Boscobel coral nursery inotungamirwa neSandals Foundation kusvika parizvino yakadyara zvidimbu zvinodarika mazana manomwe emakorari.
Kufukidzwa kwemakorari muCaribbean kwadzikira kusvika pa90%. Coral nurseries inobatsira kudzoreredza kufukidzwa kwemakorari nekukura ane hutano, anokurumidza kukura makorari uye vachidzidyara zvakare pazvivakwa zvereef. Izvi zvinobatsira zvakapihwa pekugara zvipenyu zvemugungwa pamwe nekubatsira kuchengetedza mahombekombe kubva mukukukurwa.
Iyo Sandals Foundation yakatanga chirongwa chekutanga chekusimudzira chine musoro unoti Project Sprout. Chirongwa ichi chakaitwa mukupindura kudiwa kwekupindira kwekutanga padanho rekutanga redzidzo inodzivirira kana kugadzirisa kusagadzirira kwevadzidzi.
Kuburikidza nekupindira kwakanangana, kunaka kwevadzidzisi, nekuvandudzwa kwekugona basa, hunyanzvi hwekurera vana hunosimbiswa uye mabasa epachikoro anoitwa pamba, zvichisimbisa nzvimbo yekudzidza. Sprout inotarisa vadzidzi vane makore 3-5 uye inoshanda muzvikoro zvishanu: Leanora Morris Basic, Culloden ECI, Seville Golden Pre-School, King's Primary, uye Moneague Teachers College Basic School.
West End Vacheche Chikoro
Sangano reSandles Foundation rakabatana neCHASE Fund rakabatana kutsigira kuvakwa kweWest End Infant School muNegril, Westmoreland. Danho iri chibereko chekucherechedzwa neSandals Foundation kudiwa kwenzvimbo yekutsigira Dzidzo Yevacheche (ECE).
Kuvakwa kweWest End Infant School chirongwa chakatsigirwa nebazi rezvedzidzo (MOE) chinotarisa nyaya yekuvandudzwa kwezvivakwa, nzvimbo yakakwana uye kuchengetedzwa kwevana mudzimba dzekudzidzira, uye kudiwa kwehunyanzvi hwekudzidzisa pakati pevadzidzisi vedunhu iri.
Chikoro cheVacheche chakapedzwa chinopa mukana kune vana vane makore 3-6 munharaunda iyoyo kuti vawane dzidzo yeucheche yemhando yepamusoro munzvimbo yekufunda inotsigira.
Marcy MacDonald anoti:
November 13, 2021 pa 14: 36
Semunyori wekufamba, ndinonzwa zviri nani nezve Sandals kuziva philanthropic yavo munharaunda yega yega!